Ubani owake wakhumbula ngeenkanyezi eziphelile ku-bloomers, uma kungenjalo ngemiboniso yezingcingo. NgoDisemba 2016, izwe lonke laqhaqhazela ngokumangala - uVadim Kazachenko waxosha owesifazane okhulelwe endlini, egxeke owesifazane ngokumkhohlisa ngokushada, emkhohlisa iminyaka embalwa futhi ekhohliswa ngobuqili.
Kusukela ngalesi sikhathi, ukubuyela kukaVadim Kazachenko ukubonisa ibhizinisi kwaqala. Ngeke siphendule ukungenasiphelo okungapheli okwenzeka ngonyaka odlule phakathi kuka-Olga Kazachenko nendoda yakhe edumile. Konke futhi kanjalo esikoleni. Khumbula kuphela ukuthi okwamanje umculi akambonanga noma waqaphela indodana ka-Olga Philip, akakakaze adlulisele indaba ye-DNA test. Esikhundleni salokho, umculi uphonsela amacala ngokumelene nomkakhe, osevele eqoqele abangaphezu kweshumi. Ngendlela, ngokusho kwewebhusayithi yezwe lamaSoviet, maduzane uVadim Kazachenko esitatimendeni esivame ukufuna ukuqoqa u-Olga 4.3 million rubles asetshenziswe owesifazane ngesikhathi sokuphila kwakhe ndawonye.
Futhi ngenkathi uVadim Kazachenko ephika ngokuzikhandla indodana yakhe encane futhi ezama ukuzithokozisa nomkakhe olahliwe, lo mculi wathola indodakazi endala engekho emthethweni ...
Indodakazi engekho emthethweni nendodana kaVadim Kazachenko yahambisana ne-DNA
Ngesikhathi izethameli zikulindele ngokulangazela ukuphela kwendaba ngendodana engekho emthethweni yomculi odumile uSpartak Mishulin , uhlelo " Bayeke baxoxe" bathola ingane engekho emthethweni uVadim Kazachenko. Kubonakala sengathi ebusheni bakhe ilungu langaphambili leqembu elithi "Freestyle" lalinguLo Lovelace.
E-studio yehlelo olusha "Vumela Bathi" umhlali oneminyaka engu-24 ubudala waseKharkov Vlad Romantsov uvele. Intombazane yavuma ukuthi ubaba wakhe wasekhaya nguVadim Kazachenko. Umculi wahlangana nonina kaVlad e-Evpatoria, lapho ayevame ukuvakasha ngasekupheleni kweminyaka engu-90:
Ngifunde lokhu kumama, kepha usefile iminyaka emibili manje. Lokhu ngikuzwile lapho sengivele ngiqala ebangeni lokuqala, okungukuthi, ngesikhatsi esifanele
Ukuqinisekisa amagama kaVlad, wathatha inqubo ye-DNA ye-biomaterial. Indaba efanayo yayithathwe endodaneni eneminyaka engu-8 ubudala ka-Olga Kazachenko.
Kuyadingeka ukuthi u-Olga noVlad bahlangana nezinyanga ezimbalwa ezedlule ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi futhi benza abangane. UmkaVadim Kazachenko wasamukela ngokushesha indodakazi yakhe engekho emthethweni, waze wakhetha nendodana yakhe njengonkulunkulukazi.
Ekupheleni kwalolu hlelo, umethuli wamemezela imiphumela ye-DNA test. Kwakukhona ukuthi kungenzeka ngamathuba angu-94.88%, uFilip Kazachenko noVlada Romantsova bangabantwana abancane.
Kuyathakazelisa, kunalokho ekugcineni le melodrama ezungeze uVadim Kazachenko izophela. Ucabangani? Siphawula ku-Zen le ndaba 👍 futhi sihlale siqaphela zonke izinkathazo nezisulu zokuhweba ibhizinisi.
Izingane noma abazukulu: UValeria uqale wabonisa amawele, kanti u-Anna Shulgina wakhathazeka ngezithombe zezingane
Abathandi baphupha ngokuthi "uBach" uDanila Kozlovsky
UGeorge Clooney ubala ngosizo lomkakhe uma eboshwa
Izindebe zikaVladimir Putin zathandeka uTimati
UKonstantin Meladze waqala ukukhuluma ngeveli noVera Brezhneva
Izici zezinsuku zezinsuku ezikhulayo
I-cottage cheese casserole ene-blueberries
I-horoscope yomshado ka-2017 ngezibonakaliso ze-zodiac: Ubani ngonyaka omusha okuhloselwe ukudlala umshado
U-Xenia Borodina wasusa indandatho yomshado, futhi uKurban Omarov washiya i-Instagram
Isimo sezulu eMoscow ngo-Okthoba 2016. Isimo sezulu sizoba njani eMoscow ekuqaleni nasekupheleni kuka-Okthoba - isibikezelo esivela kwi-Hydrometeorological Center
Bonisa indoda yakho
Ikhekhe elimnandi nge-ginger
Ukuzivocavoca ukuqinisa imigqa yezandla
Yini abazali okufanele bayenze ngesikhathi besengumfana?
Iphupho elihle liba ngokoqobo